The Irrawaddy's Blog: သီချင်းကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ
သီချင်းဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ တဲ့။ ဦးဇော်ဇော် နဲ့ ဒေါက်တာစိုင်းဆမ်ထွန်းတို့ကို
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် သီချင်းဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ၊ အဆိုတော် ဂျင်းနီ တို့နဲ့ တွေ့ရတာပါ။
ဟို ၂ ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာလည်း ပိုက်ဆံတွေ အထပ်လိုက် ကိုင်ထားပါတယ်။
ဘယ်ပွဲမှာ ဆိုကြ ပျော်ကြတယ်ဆိုတာ မသိရသေးပါ။
ဧရာဝတီသတင်းတပုဒ် http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/3269-2010-05-31-10-58-42 မှာလည်း ကိုမိုက်ခဲတို့ ၂ ယောက်ပုံကို ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
BonPyatBaMaung said... :
they both M-F are inebriating.
corrupt, debauchery, sex, money-chasers, =====>lead to premature demise - not more than 60 years of signs of life for these M-F.
ငွေပိုသူ နဲ့ ငွေလိုသူ .. ဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေး ကို .. ပြန်တွေးမိတယ် ...
This is an answer for how and where the billion dollar of debts were spent. Now the people of Burma will have to settle for them.
ဒီပုံက Mandalay Hill ဟိုတယ်နောက်မှာကျင်းပခဲ့ တဲ့ ၂၀၀၉ ရတနာပုံဘောလုံးကွင်းဖွင့်ပွဲအပြီး ဂုဏ်ပြုပွဲက ပုံပါ။ ဒီပွဲကို မန္တလေးတိုင်းက ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ ဘောလုံး နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ မီဒီယာတွေ၊ ဘောလုံးသ မားတွေအားလုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် လည်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီပွဲ ကိုတက်ရောက်ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင် ဒီပုံဟာ နောက်ခံအကြောင်းကိုသိရင် ပြဿနာမရှိပေ မယ့် နောက်ခံအကြောင်းကို မသိရင်တော့ ပါဝင်ပတ် သတ်သူတွေကို သိက္ခာကျစေနိုင်တဲ့ပုံလို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပွဲမှာ ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဒေါက်တာစိုင်းဟာ အားလုံးဝိုင်းပြီးဆုချ တဲ့ပိုက်ဆံတွေကို ဆုပေးတာပါ။ ဓါတ်ပုံထဲမှာ ဒေါက် တာစိုင်းဇနီးကွယ်နေပေမယ့် ဒေါက်တာစိုင်းဇနီး လည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ဇနီးလည်းပါပါတယ်။ မန္တလေးဗထူး ကွင်းသတင်းတွေထွက်လာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ဒီပုံ တွေတက်လာတာဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ဓါတ်ကို သိပ်ပြောစရာမရှိပေမယ့် မလိုလားအပ်ဘဲ ကာယကံ ရှင်တွေကို မထိခိုက်စေချင်လို့ မြန်မာပြည်သား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမနစ်နာစေချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ခုလိုကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်ဖြေ ရှင်းပေးတာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ခုဗထူးကွင်း မပေးလို့ပြောနေကြတာတွေကို ဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့မစိမ်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မေး ကြည့်ချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဦးဇော်ဇော်က ဗထူးကွင်းကို ပေးမယ်ဆိုရင်ရော ပေးလို့ရပါ့မလား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူဌေးကြီးမကလို့ ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် သူလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရလို့လားခင်ဗျာ...
mgdemo said... :
အပြောင်းအလဲဖြစ်မှ တို့မြန်မာတွေအဆင်ပြေမယ်လို့ ပြောခဲ့သူကြီး ခုတော့ ကြားညပ်နေပြီ....ဟုတ်တယ်...သူပေးချင်လည်း အောင်သောင်းက ဘယ်ပေးချင်ပါ့မလဲ..
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အဲဒီလိုချချင်ပါတယ်။ အဲ မေ့လို့ ဆု ဆု ကိုပြောတာပါ
တဖြေးဖြေးနဲ. လတွေလည်းပြောင်း၊ ၇က်တွေလည်းနီး၊ နောက်ထပ် ဘာတွေ ပြောင်းလဲကြဦးမလဲ လို. စောင်.မျှော်နေသူတွေက ဒု နဲ. ဒဲ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောင်ပွဲမှာ၊ ပါဝင် ရှင်ပြိုင်ကြမဲ.၊ မဲဆွယ်သူတို.အကြောင်း၊ သိကောင်းစ၇ာလေးတွေလည်း၊ စောင်.နားထောင်ချင်တဲ.သူတွေ ရှိကြပါသေးတယ်။ မဲ ဆိုတာက အနိုင် နဲ. အရှုံး ၂ မျိုးပဲရှိတတ်ပါတယ်။ ကြားနေ၇တဲ. သတင်းအ၇၊ ဟောပြောပွဲလုပ်ဘို. မန္တလေးမှာ ဘော.လုံးကွင်းကို ပေးမယ်လို.ကတိပေးထားပြီး၊ ခွင်.မပြုနိုင်လောက်တဲ. အခြေအနေကို ကြည်.ခြင်းအားဖြင်. ခုခံမှု.resistance သို.မဟုတ် ဆန်.ကျင်မှု. against လုပ်၇ာကျမနေဖူးလားလို. စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံေ၇း စကားအ၇ ဆို၇မယ်တို၇င် block ပိတ်ဆို.တယ်လို. စွပ်စွဲပြောဆိုနိုင်ပါလိမ်.မယ်။ NLD အနေနဲ. သတိကို လက်ကိုင်ထားပြီး၊ ဦးနှောက်ကောင်းကောင်း၊ ခေါင်းအေးအေးနဲ. တိုင်ပင်ကြပါ၇န် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ "what if " ဆိုတဲ. စကားကို အမြဲတွေးထားကြဖို. မမေ.ကောင်းပါ ဆိုတာလဲ၊ မေတ္တာ၇ပ်ခံ သတိပေးလိုပါကြောင်းနဲ. လူထုကိုယ်စား Public View.